कोभिड-१९ ले दिएको मनोवैज्ञानिक उपहार – Sitalpati
कोभिड-१९ ले दिएको मनोवैज्ञानिक उपहार
सितलपाटी संवाददाता २०७७, २० फाल्गुन बिहीबार
बिश्व इतिहासिक कालखण्डलाई नियालेर हेर्नेहो भने हेरेक सताब्दिमा भौतिक होस वा जैविक कुनै न कुनै बिष्सम संकट हरु पृथ्वीले खेपी रहेको हुन्छ। plague, leprosy, cholera,measles,russian flue,HIV/AIDS जस्ता भयानक महामारीले बिश्वलाइ मानबिय तथा भौतिक हनि पुगेको थियो ।
प्राकृतिकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले
मानव सभ्यता र ईतहासिक जोगाई राखेको हुन्छ।
तर यो २१ औं सतब्दीको वर्तमान समय लाई घहिरो विश्लेण अनुसार भौतिक आर्थिक र मानवीय जगत पुरै संकट मा देखिन्छ।विकासको साथ धेरैजसो बिनास निम्ति रहेको देखिन्छ।
बिभिन्न प्रकर्ती प्रकोप वायु प्रदुषण,वताबरण दुघर्न्नधित, रसायन सँगको निकट र सबै भन्दा ठुलो र डर लाग्दो मानव खानपीन मनोविज्ञान र दैनिकी ले मानव सभ्यता लाई कुन दिशा तर्फ लैजाने हो भन्ने पुरै विश्व ले मनन गर्नु पर्ने हुन्छ।
मानव उत्पति र विकास को क्र
ममा धेरै उथलपुथल भयो।
कृषि क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति,मानसिक क्रान्ति र जैविक क्रान्ति बिश्व ईतिहास र मानव यतिहासको सुनौलो पिस्टभुमि हो।
परिवर्तन तनावग्रस्त हुन्छ ।परिवर्तन गर्नका लगि बरिबर्तित तत्त्व हरु सङ समना गर्नै पार्ने हुन्छ।तर यहाँ सम्पूर्ण मनव सभ्यताले के बुज्न जरुर छ भने हामीले बिकास गर्ने क्रमा बिनाश त गरिरहेका छैनौ?
के त्यो बिकास प्राकृति मैत्री छ त?
के त्यो बिकास ले प्रकर्ती मा रहेका जीव को genetic material अप्रत्याशित ढंगले परिबर्तन त भएको छैन ?
के त्यो सामानाले मानव भबिस्य पुरा संकटमा त छैन?
अमेरिका,चीन, जर्मनी,रुस जस्ता बिज्ञानको मैदानमा उदाउँदा देश लगायत बिश्वब्यापी रूपमा मनन गर्नुपर्ने अवस्था आयको छ?
विभिन्न चुनौती हरु सङ समना गर्दै आइरहेको यो मानव सभ्यता २१ओ शताब्दीको तेर्सो दसकको सुरुवातमा भयानक परिस्थिति सङ लड्नु परेको छ।नयाँ प्रजातिको corona virus सङ को यो लडाइँ बिश्वब्यापी रूपमा भयभित बनेको चरम अवस्था थियो।
सर्बप्रथम corona virus 1930 को दसकमा घरपालुवा कुखुरामा infectious
bronchitic virus (IBV)द्वार उत्पत्ति भएको थियो।1960 को दसक मा human corona virus देखा परेको थियो । समान्यतय यसले धेरै आसर नदेखिएपनि 2003 मा देखा परेको corona virusले severe acute respiratory syndrome (SARS)भन्न्र भयनक सरिरिक समस्या उत्पन्न गरेको थियो ।जस्मा तल्लो र मथिल्लो स्वास नलीमा संक्रमण गरेको थियो।
विभिन्न प्राकृतिक परिबर्तन द्वारा यसले आफ्नो genetic material change गर्दै जादा september 2012 मा नयाँ प्रजातिको corona virus देखा पर्यो ।
सुरुवातमा novel corona virus 2012 नमाकरन गरेको थियो । अहिले आधिकारिक रूपमा यसलाइ Middle East Respiratory Syndrome (MERS)भनिन्छ।
28sep.2012 मा WHO ले आधावोधिक गरे अनुसार यो virus सहजै रूपमा मानिस बाट मनिस मा नसर्ने मनियको थियो । तर 12may.2013 मा human to human transmission काे एउटा case france मा देखापरे पछी tunsia, quatar saudi arabमा मनिस द्वारा मानिसमा सरेको देखा पार्‍यो। सामान्य रूपमा मनब छ्यती पनि गरेको थ।
क्रम बद्ध रुप मा dec.31 2019 मा अस्तित्वमा रहेकोे corona virus ले नयाँ genetic strain का साथ चीनको वुहान बाट देखा पर्यो।जसलाइ बिश्व स्वास्थ संगठन ले 2019-nCoV नामाकण गर्‍यो।
पछि international commete on taxonomy of virus ले SARS-CoV-2 नाम देयो।जसमा 70% geneetic गुण SARS-CoV सङ मिल्दो थियो।
यसको आकृति ठुलो उभडा (bulbous surface projection) र गोलाकार spherical हुन्छ।यसको व्यास diameteer करीब 125nm र envelopeको व्यास 85nm हुन्छ भने spike को 20nm का हुन्छन्।
envelope ले lipid bilayer द्वारा ओगटेको हुन्छ ।औसत 74 surface spike हुन्छ ।Envelope भित्री nucleocapsid हुन्छ जस्मा single stranded RNA घेराउमा हुन्छ।
यो एक ब्याक्ती बाट अर्को ब्याक्तीमा सहजै रूपमा सर्न सक्छ।मुख्यतय यो निश्चित रूप मा के बाट सर्छ किटानी न भए ता पनि सामान्यतया थुकका छिटा (respiratory droplets)द्वारा ब्याक्ती ब्याक्ती बिचको सम्पर्क aerosol fomite तथा fecal oral मध्यम बाट सर्न गर्दछ।येसले स्वास नलिको epithelial तन्तु हरु मा spike को मध्यम बाट चप्किनछ र cytoplasma मा गयेर replicate हुन्छ।त्यस पछी यसले शरीर को रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नराम्रो तवरले घटइदिन्छ। शरीरको विभिन्न भागहरुमा आसर गरेर मनिसलाई मृत्युको मुख सम्म पुर्याउछ।
यसबाट बच्नको लागि संक्रमीत सङ प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नु हुँदैन। यदी गर्नु पर्यो भने ब्याक्तीगत सुरक्षा अप्नायर सतर्कता साथ् गर्नु पर्ने हुन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढायर यस virus सङ बिजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। निर्जीव बस्तुमा पनि यो virusजीबित हुने भएकोले अपरिचित समान छोइ सकेपछी राम्रो सङ साबुन पनि ले हात धुने जस्ता कर्यले COVOD 19 बत बिजय प्राप्त गर्न सकिन्छ।
मनिस चेतनाले भरिएको एक समजिक प्रा‍णी हो। यो भन्दा पैले धेरै चुनौतीपूर्ण समस्या समाधान गरि सकेको छ। विभिन्न रोग र शोक सङ बिजय हासिल गरि सकेको छ।तर बिगतमा, बर्तमानमा र भबिस्यमा मनिसले आफ्नो दैनिकी, खानपिन रहनसहन सरिरिक तथा मनसिक सन्तुलन कसरी परिचालन गर्थे,गरिरहेका छन र भबिस्यमा कसरी गर्ने छन्?भन्ने मनब सव्य्ताको सबैभन्दा थुलो प्रस्न हुन सक्छ ।
पहिला मनिस बिज्ञान र प्रबिधिको कमिल्रे बचिरहेका थिए।
सारिरिक समस्या पहिचान गर्न निकै कथिन हुन्थ्यो। प्राकृतिमा जेजति तत्तो छ त्यस लाइ प्रत्येक्ष रुपमा उपयोग गर्ने गर्दथे। चेतना को कमिले गर्दा आफ्नो स्वस्थको लागि थोरै समय छुट्टाउथ्यो।हाम्रो मानव शरीरले कसरी काम गर्दछ?येसको परिबर्तन कसरी हुन्छ ?हाम्रो मस्तिष्कको सोच्ने प्रक्रिया कस्तोहुन्छ? neuron हरुको कनेक्स्न fire and wire ले हाम्रो मनोबिज्ञानमा कस्तो आसर पर्छ ? हाम्रो खने,पिने,ब्याम, ध्यान र योगा ले हाम्रो सरिरलाई कति प्र्तिसत स्वस्थ राखेको हुन्छ? के हाम्रो रोग निको पार्न औसधि हुन सक्छ ? तेस्को प्रभावले हाम्रो मन,मस्तिष्क, शरीर र मनोबैज्ञानमा कस्तो असर पर्न सक्छ? भन्ने उत्सुकताको कमि थियो त्यो समयमा।
बाच्नको लागि प्रकृति सङ भयानक युद्ध गर्नुपर्ने थियो।
struggle for existence and survival of fittest जस्त सिद्धान्त आङ्लेका थिए तेत्ती बेला। के खना राम्रो के नराम्रो कसरी खने भन्दा पनि हाम्रो शरीर को कोशीका कसरी जीबित रख्ने भन्ने तनब खेपिरहेका हुन्थे।
तर समय एकनास कहाँ रहन्छ र?
बिस्तारै बिस्तारै homonoid तथ हम्रा पुर्खाको मस्तिष्कमा चेतनाको पैरोले परिबर्तनका रेखा हरु बुन्न थल्यो।कतिपय खोज अनुसन्धान गरे भने कतिपय accidental आफै उत्पती भय। र चेतनाले उनिहरुको मस्तिष्कमा डेरा जमायो। हामी बच्न्नको लागि संघर्ष गरिरहेका छौ कि अनिश्चित संघर्षले अगाडि बढी रहेका छौ?भन्ने क्रान्तिकारी मनसिक ब्य्बहर Revolutionary Coagnative Thinking) हरु उत्पन्न हुन थल्यो।
हामी किन बचीरहेका छौ? हाम्रो यतिहासिक कालखन्नमा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो। अब आउने समस्या प्रकर्ती प्रकोप र चुनौती सङ कसरी बिजय प्रप्त गर्न सकिन्छ? कस्तो अवस्था मा हाम्रो शरीरको रसायन र भौतिक शरीर ले प्रभावकरि धङ्ले काम गर्न सक्छ? यसलाई परिबर्तित प्राकृति सङ कसरी fit भयेर रख्न सकिन्छ भन्न्र येस्ता खोज्कारी बिचारले बिज्ञान तथा प्राबिधिको नया यूगमा प्रवेश गर्‍यो। २० औं शताब्दीको समय तिर संसार को नया रुप रेखा फेरियो। विभिन्न क्रन्तिहरु युद्धहरु प्राकृतिक प्रकोप ले अझ नया युगको खोज अनुसन्धान बिस्लेसन अनि सम्भावना को बाटो तय भयो।
येस्तो येस्तो नव क्रन्ती र आविष्कार ले संसारमा हलचल सृजन!गरेको छ। मनिस को दैनिकी बदलिनु को सथ साथै स्वस्थ्य अवस्था बदलियको छ। महामारी लाई सहजै रूपमा नियन्त्रणमा लिन सक्ने प्राविधिको आविष्कार भैसकेको छ।
नव अविस्कार संगै मनिसलेकतिपय कुरा हरु बिर्सेको देखिन्छ। अफ्नो जिम्मेवारी काम कर्तव्य लाई भुल्न थलेको छ। मनिस ले धेरै कुरा बुझ्यो तर लगु गरेन। धेरै बिज्ञान को देन सङ निकट भयो तर सहि ढङले सधुपयोग गर्न जनेन। कतै कतै बिज्ञान ले बिनाश त निम्त्याएको छैन?
मनिस मा दुई किसिमको क्षमता हुन्छ एक सरिरिक (physical)र अर्को मनसिक (coagnitive)
अबको 21 को सताब्दिमा यो दुईवटा क्षमता लाई एकै साथ अगाडि लैजन धेरै कथिन छ। हाम्रो शरीरको biochemical algorithms जति गैरो रूपमा बुझ्छौ तेतिनै तेतिनै हाम्रो स्वस्थ्य र क्षमता बढने छ। अब हाम्रो खने पिउने ब्याम गर्ने ध्यान गर्ने सुत्ने तरिका फरक हुनु पर्छ। येस को लागि हामीले हाम्रो biochemical mechanism लाई उच्च स्तरबाट बुझ्न अतयन्त जरुरी देखिन्छ।
अहिलेको सताब्दिको समयमा बिश्वब्यापी मनसिक मनोबैज्ञानिक र गलत प्रचार प्रसारको महामारी फैलन कति समय लग्दैन।त्यसैले हामीले यो भन्दा अगाडी कसरी दैनिकी चलाउथियो ? हामीले हाम्रो भबिस्य प्रती कति संबेदनसिल थियो ? अप्रत्याशित घटना हरुसङ कसरी समना गर्नु पर्दछ? मनिस एकजुट भय पछि कसरी चुनौतिसङ बिजय प्राप्त गर्न सकिन्छ? हाम्रो स्वस्थ सम्बन्धि रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी बडउन सकिन्छ? अब आउने भबिस्यमा कसरी आगाडि बढनु पार्ने हुन्छ? भन्ने कुरा सम्पुर्ण मनब जति ले नया ढंगले सोच्नु पर्ने हुन्छ।
आबको भबिस्यमा हाम्रो mental stamina एकदम स्थिर र सक्तिसालि हुनुपर्ने हुन्छ।Mental flexibility छिटोछिटो हुनु पर्छ।किनकी biotechnology र information technology 21ओ सताब्दिको अवसर संगै चुनौती बनेको छ।
भबिस्यमा आउने चुनौतीसङ डटेर आत्मबिस्वासका साथ सामना गर्नका लागि समजिक, अर्थिक र राजनितीक सङ्रचना परिबर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। बर्तमान सङ्रचना बिगतको बङसानू गुणमस परिचालित छ। येसले गर्दा हामी चुनौती सङ सामना गर्न अयोग्य हुन सक्छौ। अब को समयमा principle of protecting human rather than job भन्ने सिद्धान्त लगु हुनु पर्छ।
मनिसले आ आफ्नो biochemical algorithm लै राम्रोसँग बुझिर बलियो बनाउपर्ने हुन्छ । किनकी कुनैपनि राजनितीज्ञले मनिसको biochemistry लाई संबेदनात्मक botton थिचेर डर, चिन्ता ,घिणाृ ,खुशी पैदा गर्न सक्छ।
हामीहरु अहिले the knowledge of illusion मा बचिरहेका छौ। मान्छेका मुखाराबिन्दुबाट निस्कने सब्दहरु धेरै नै सस्तो छन। science fiction ले भबिस्यमा धेरैनै परिबर्तन ल्याउन सक्छ।तसैले अब आउने अप्रत्याशित चुनौतीसङ समना गर्न सम्पुर्ण आर्थिक राजनीतिक समजिन सङ्रचना नया download गर्नुपर्ने देखिन्छ।
गुठिचौर ४ जुम्ला